झापामा होटलमा लगानी बढ्दै «
झापामा होटलमा लगानी बढ्दै
कृषि उत्पादनको हब भनेर चिनिने झापा पछिल्लो समय होटलको समेत हब बन्दै गइरहेको छ । बिर्तामोड, दमकलगायत क्षेत्र व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास हुँदै गइरहेकाले तारे होटलहरु थपिएका छन् । कोरोना कहरमै पहिलो पटक प्रदेश १ मा धुलाबारीमा पाँचतारे होटल सञ्चालनमा आएको छ भने बिर्तामोडमा पनि तयारी हुँदैछ ।
झापा – नेपाल सरकारले तामझामका साथ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुरु गरेतापनि कोरोना भाइरसबाट सिर्जित माहामारीले स्थगित भयो । २० लाख पर्यटक ल्याउने घोषणासहित नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु भएपछि नयाँ–नयाँ चेन होटल, नयाँ रिसोर्ट र रेष्टुरेन्टहरु खुल्ने र सञ्चालन हुने अवस्था रहे पनि प्रभावित बने । कतिपय त सञ्चालनमै आउन सकेनन् ।
तर कोरोना कहरकै बीचमा झापामा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी थपिएको छ । कृषि उत्पादनको हब भनेर चिनिने झापा पछिल्लो समय होटलको समेत हब बन्दै गइरहेको छ । झापाको बिर्तामोड, दमकलगायत क्षेत्र व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास हुँदै गइरहेकाले पनि पर्यटन पूर्वाधारमा गरिएको लगानी सुरक्षित देखिन्छ । कोरोना संकटकै समयमा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरेर करोडौँ लगानीमा होटल सञ्चालनमा आएका छन् । धुलाबारीमा होटल मेची क्राउन (पाँचतारे) र बिर्तामोडमा सिद्धार्थ होटल (तीन तारे) सञ्चालनमा आएका हुन् ।
कोरोनाले बाह्य पर्यटक घुम्न आउने अवस्था पनि छैन । पर्यटक आइहाले कसरी गन्तव्यसम्म सुरक्षित पु¥याउने भन्ने योजना न सरकारको छ न पर्यटन व्यवसायीको । यस्तै, चुनौतीका बावजुद छिमेकी देश भारत, बंगलादेश र भुटानका पर्यटकलाई लक्षित गर्दै प्रदेश –१ मा पहिलोपटक पाँचतारे होटल सञ्चालनमा आएको हो । पछिल्लो समय झापा होटलको हब बन्दै गएको प्रदेश–१ की पर्यटन व्यवसायी एलिना मगर बताउँछिन् । “खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका भारतीय र बंगलादेशी पर्यटक सुविधा सम्पन्न होटलको अभावमा नेपाल आउँदैन थिए” मगर भन्छिन्, “प्रदेश–१मा नै पहिलो पाँचतारे होटल झापामा सञ्चालनमा आउनु सबै पर्यटन व्यवसायीका लागि सुखद् हो ।” सीमा क्षेत्र नजिकै पाँच तारे होटल खुलेकापछि प्रदेश–१को पर्यटन व्यवसाय मजबुद हुने अनुमान उनले गरेकी छन् । नेपालीको पनि खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै गएकाले विवाह, सभा समारोह गर्नका साथै स्वदेशी तथा विदेशी संस्था तथा माइस पर्यटनका लागि उपयुक्त स्थलमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भएका छन् ।
मेची क्राउन काँडभिट्टादेखि ४ किलोमिटर पश्चिम मेचीनगर नगरपालिका धुलाबारीमा सञ्चालनमा आएको हो । भ्रमण वर्ष २०२० को सुरुमै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भए पनि कोरोना महामारीका कारण असोजदेखि सञ्चालनमा आएको हो । डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालनमा आएको पाँचतारे होटल भेगास सिटी इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले सञ्चालनमा ल्याएको हो । होटल परिसरका हेलिप्याड, स्पा, जिमहाउस, स्वीमिङ पुल, ग्रीन गार्डेनलगायत सुविधा छन् भने भविष्यमा व्यापारिक मलसमेत बन्ने बताइएको छ ।
सम्मेलन, सेमिनार, बैठक र विवाहलगायत कार्यक्रम गर्न सकिने उक्त होटलमा १ सय ५ वटा सुविधासम्पन्न कोठाहरु छन् । जसमा ५ वटा मेची सुइट्स रुम, १० वटा एग्जुकेटिभ भिला रुम, १९ वटा मेची क्लब रुम र ७१ वटा डिलक्स रुम रहेका छन् । होटलले देशको अर्थतन्त्र चलायमान साथै मजबुद बनाउनसमेत सहयोग गर्ने छ । होटल पूर्णरुपमा सञ्चालन भएपछि ९ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र हाल ४० प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् ।
होटलले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पु-याउँछ
महाप्रबन्धक, मेची क्राउन
कोरोनाको समयमा होटल सञ्चालनमा आएको छ । के अहिलेको आम्दानीले खर्च धानेको छ ?
मुलुकको पर्यटन व्यवसायलाई समृद्ध तुल्याउन स्तरीय होटल आवश्यक हुने भएकोले प्रदेश–१ मा पहिलो पाँचतारे होटल सञ्चालन ल्याएका छौँ । होटल निर्माण कार्यसम्पन्न भएको र भ्रमण वर्षसँगै सञ्चालनमा आउने प्रचार गरेकाले समयमा नै सञ्चालनमा आउनु पर्नेमा कोरोना कहरको कारण २ महिना ढिला गरी हामीले गत असोजदेखि होटल सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।
शुरुमा नै बन्द गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने हुँदा पनि होटल सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ । कुनै पनि होटललाई आम्दानीले धान्नका लागि कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत लज बुकिङ हुनुपर्छ । कोरोना महामारीको कारण अहिले बुकिङ १० प्रतिशत मात्र भइरहेको छ । आन्तरिक पर्यटकका लागि सुपथ मूल्यमा प्याकेज सञ्चालनमा ल्याइएकाले यो परिस्थितिमा खर्च व्यवस्थापनका लागि केही सहज भएको छ । रेष्टुरेन्ट राम्रोसँग सञ्चालनमा छ । जन्मदिन, विवाहउत्सव मनाउनै लागि विराटनगर, धरानदेखि ग्राहकहरु आउनु हुन्छ ।
कोराना कहरपछि भने झापामा पाँचतारे होटल सञ्चालनको सम्भावना कस्तो रहने आकलन गर्नुभएको छ ?
पूर्वमा पर्यटनको राम्रो सम्भावना देखेर नै होटेल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पूर्वी नाका काँकरभिट्टादेखि भारत, बंगलादेश र भुटान छोटो दुरीमा रहे पनि नेपालतर्फ सुविधासम्पन्न होटलको अभाव रहेको थियो । कञ्चनजंघा हिमाल, ठूलो पाथिभरा, इलाम, भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यमा आउने पर्यटकहरु सुविधासम्पन्न होटलको खोजीमा थिए । यी पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकलाई लक्षित गरेर होटल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पर्यटन व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन प्रदेश–१ मै पहिलो पाँचतारे होटल सञ्चालनमा ल्याउन हाम्रो टिम सफल भएको महसुस गरेका छौँ । चन्द्रगढी विमानस्थलबाट १७ किलोमिटर र भारतको बागडोग्रा विमानस्थलबाट २५ किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित होटल मेची क्राउनमा भारत, बंगलादेश र भुटानबाट आउने पर्यटकको रोजाइमा पर्ने प्रदेश –१ एक मात्र होटल हुने छ ।
स्थानीय उत्पादन र मौलिक परिकारलाई कसरी प्रबद्र्धन गर्नुहुन्छ ?
पाँचतारे होटल भएकाले स्तर कायम राख्नका लागि भारतको सिलगढीबाट खाद्यान्न ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । हाम्रो लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु नेपालमा पाइँदैन । पाइहाले पनि खरिदका लागि काठमाडौँ पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । यसका साथै हामीले मौलिक परिकारलाई पनि प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेका छौँ । होटलमा विभिन्न प्रकारका खानाको स्वाद, नेपालका आदिवासीको विशिष्ट मौलिक परिकारसमेत उपलब्ध छ । झापामा नै उत्पादन हुने तरकारी, दुग्धजन्य परिकार खरिद गर्छौँ । मेचीनगरमा नै सञ्चालित नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेका परिकार खरिद गर्दै आइरहेका छौँ ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो क्यासिनो सञ्चालनमा आउने भनिएको छ, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
हामीले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो क्यासिनो सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ । अहिले क्यासिनो सञ्चालन स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । सरकारले पाँचतारे होटल वा सोसरहको सुविधामा मात्रै क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिदैँ आइरहेको छ । सीमा नाका सहज भएसँगै क्यासिनो सञ्चालनमा ल्याउने छौँ । होटलमा चर्चित भारतीय ब्रान्ड गोल्डेन क्यासिनो गु्रपको प्रवेश भएको छ । होटल परिसरमा रहेको क्यासिनोलाई गोल्डेन गु्रपले सञ्चालन गर्नेछ । पूर्वमा क्यासिनो पर्यटनको सम्भावना रहेकाले क्यासिनो सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
पूर्ण रुपमा कहिले सञ्चालमा आउँछ ?
महामारीबाट बढी प्रभावित बनेको होटल क्षेत्रमा अहिले पनि उत्साह छैन । हामी पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनौँ । होटल खोल्दा खर्च बढ्ने तर व्यापार भने नहुने देखिएपछि अझै पनि व्यवसायी त्रासमै छन् । कोरोना संक्रमण दर बढिरहेकाले पनि विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्न सकेको छैन । फाट्टफुट्ट बाह्य पर्यटक आउन थालेका छन् । तर, यो परिस्थितिमा पर्यटक आउनु नै खुशीको विषय हो । आएका पर्यटकलाई हामीले पूर्णरुपमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने हुन्छ । होटल मेचीक्राउनले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर मात्र ग्राहकलाई प्रवेश गराउँछौँ । दशैँ तिहार र छठ पर्वका अवसरमा आन्तरिक पर्यटक भने बढे । हामी जतिखेर पनि होटल पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नसक्ने तयारीमा छौँ, तर पर्यटक आउनुप-यो व्यापार हुनुप-र्यो । तर, हामी आशावादी छौँ आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्र गतिशील हुनेछ । जति सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा आए त्यति नै आर्थिक गतिविधि बढेर जान्छ ।